Warfaafinta, “Madaxii Al-shabaaba ee Shabeellaha Hoose waa Dilnay” – Radio Daljir
Warfaafinta, “Madaxii Al-shabaaba ee Shabeellaha Hoose waa Dilnay”
May 7, 2017 3:16 g 1
5tii May 2017 ayey Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ay dileen Hoggaamiyahii Al-Shabaab Maclain Cismaan Cabdi Badil iyo seddex maleeshiyaadka kooxdaas ah. Dhimashada hoggaamiyaha waxey wiiqeysaa awooda kooxda argagaxisada ah ee ka howlgasha Shabeelaha Hoose, taboo ah guul weyn oo u soo hoyatay ciidanka iyo nabadeynta gobolkaas.
Howlgalkan ciidanka waa mid dib loogu xoojinayo dagaalka lagula giro kooxaha argagaxisada ee Al-Shabaab iiyo cabsida joogtada ah ee kooxdani ay ku cabsigeliyaan shacabka Soomaaliyeed.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaa u furan fursad ay kooxdaas argagaxisada ah uga soo baxaan bacdamaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya waxey xoojinayaan dagaalka lagula giro argagaxissada ah. Dhalinyaro fara badan ayaa Dowladda ku soo biiray ee inta ay goori goor tahay fadlan ka soo carar kooxdaas argagaxisada ah. Waana fursad qaali ah oo aad dib-u-dhiska dalkaaga uga qeybqaadan karto, kuna hagaajin karto mustaqbalkaaga, kan qoyskaaga iyo kan dalkaaga.
Dowladda Federaalka Soomaaliyeed
Madaxwaynaha Puntland oo Agaasime Cusub u Magacaabay Hay’adda PAC
Sabiriin Yusuf 1 year
Aar been badanaa wecelkaan